Shirka Golaha Amniga Qaranka oo dib dhac ku yimid – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shirka Golaha Amniga Qaranka oo dib dhac ku yimid
Waxaa maanta dib u dhac uu ku yimid Shirka Golaha Amniga Qaranka ee madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka oo la filayay in uu ka furmo Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa Baaqday.
Shirkan ayaa lagu madalsanaa in uu maanta oo 28-ka bisha 3-aad ee March uu Madaxda Dowladda iyo kuwa Maamul Goboleedyada uu uga furmo Magaalada Baydhabo.
Waxaana Shirka baaqday la filayay in diirada lagu saaro dhameystirka qeybsiga Kkeyraadka, hanaanka doorashooyin 2020-ka, amniga iyo arrimo kale.
Dib u dhaca Shirkan ayaa loo sababeeyay khilaafka siyaasadeed ee hareeyay Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliyeed.
Baarlamaanka Galmudug oo ku kulmay Dhuusamareeb